Isbarbardhiga GPS - Leica, Magellan, Trimble iyo Topcon - Geofumadas
Ogast, 2013 GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay, topografia
Waa wax caadi ah, marka aad ka iibsaneyso qalabka topotography, waa lagama maarmaan in la isbarbardhigo GPS, saldhigyada guud, software, iwm. Geo-matching.com waxaa loogu talagalay uun.
Geo-gaarsiinta waa goobta Geomares, isla shirkadaas daabacata majaladda GIM International. Haddii aan xasuusto, mudnaanta weyn ee joornaalkan waa in la sameeyo dib u eegis dhamaystiran ee teknoolajiyada kala duwan ee loo adeegsado berriga gogosha. Geo-ku-beddeliddu maaha wax ka badan tan dib-u-eegisyada miisaska u dhigma si go'aan looga dhigo mid ka badan shuruudaha labiska.
Nidaamka waxaa aad u horumarsan, liiska hadda qaybaha 19, in ka badan qeybiyeyaasha 170 500 iyo in ka badan wax soo saarka. Qaybaha waxaa ka mid ah:
Software for qalabka fogaynta sawirada fog
Rugaha shaqada ee sawir-qaadashada
Gaadiidka gawaarida iyo gawaarida gawaarida madaxbanaan
Nidaamka baaritaanka Sonar
Kamarad dijital ah
Nidaamyada dhejinta laysarka
Nidaamyada GIS, qalabka iyo barnaamijka loogu talagalay mobile
Nidaamyada hababka isgaadhsiinta
Si aad u muujiso sida ay u shaqeyso waxaanu sameyn doonaa tijaabo afar qalab GPS ah:
Isbarbar dhigga GPS
Tani waa kiiska haddii aan ku darno isbarbardhigga GPS:
Qaybta ayaa la doortaa, ka dibna magaca iyo ugu dambeyntii kooxaha. Dhinaca bidixda, xulashada kooxda ayaa la calaamadeeyay.
Xulashada waxay taageertaa oo keliya taageerooyinka 4, laakiin waa laga saari karaa oo waxay ku ridi kartaa likaadaa adigoo ilaalinaya xulashada qaybta. Iyo tusaale ahaan tani waa wadaag GPS ah.
Macluumaadka waxaa bixiya kuwa soo saaraha qalabka, sidaas darteed haddii ay maqan yihiin waa qaladkooda.
Xaqiiqooyinka xiisaha, ee isbarbardhigga GPS:
sano Release kooxda The: Juno Trimble ahaa in 2008, ka Topcon GRS-1 in 2009 iyo 2010 Leica iyo Magellan. Ma noqon doonto tixraac weyn, laakiin waxa ay sabab u tahay wakhtiga iyo kooxdana waa in isbarbardhig la sameeyo. Xaaladdan oo kale, aan ka mid ka weyn ah si aad u arki kartaa sida sannad kasta qaababka cusub waxaa lagu daray qalabka Trimble, taas oo sahlaysa isbarbardhigga dhexdhexaad ah. Waxaa sidoo kale jira badeecad muujineysa haddii ay weli tahay wax soo saar.
Dhammaan marka laga reebo Trimble Juno keeni software waxaa ka mid ahaa: The Magellan Mobile Mapper keentaa Field / Mobile Office Mapper laakiin sidoo kale taageertaa ArcPad, Field Leica Zeno ku 5 keentaa Xafiiska Zeno / Zeno iyo Topcon Egis. Saddexdaas waxaad arki kartaa in xaddidaadda ugu weyn ay tahay Zeno sababtoo ah ma ogolaato in la beddelo sifooyinka.
Dhammaan, marka laga reebo Trimble Juno oo taageeraya GLONASS
Sida wakhtiga qabashada qabowga ee dhibicda koowaad, waqtiga ugu gaaban waa Trimarka Juno (30 ilbiriqsiyo), halka ugu badana waa Leica Zeno 5 (daqiiqo 120). Labada kale waxay ku jiraan wareegyada 60.
Sida nidaamka qalliinka, qof walba wuxuu isticmaalaa Windows Mobile 6, marka laga reebo Zeno 5 oo wali la isticmaalayo Windows CE. Sidoo kale ma taageeri karo macluumaadka u gudbinta server-ka fog.
Jilicsanaanta nolosha batroolka waa Topcon, oo keliya saacadaha 5 halka kuwa kale ay bixiyaan saacadaha 8. Go'aan ka fiirsaneysa in maalin shaqo u daran waa inta u dhaxaysa saacadaha 6 8 iyo, siin dhibaatooyinka masaafada iyo gaadiidka ee goobaha helitaanka aan joogto ahayn.
Marka la eego isku xirnaanta, Zeno 5 waa qalab fiican, oo taageertaa xadhkaha xajmiga ah iyo kaadhka GSM ee internetka.
Sida uu sax u, damaanad ugu fiican waa in MobileMapper ah, oo bixiya submeter aan post-processing, post-processing iyo centimetric sporta la RTK for stepless. Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in Topcon uu taageerayo wado badan, ma cadda sida saxda ah.
Sidaa darteed, haddii aad kala dooraneyso kooxdan 4, fursadaha waxay u dhexeeyaan Spectra MobileMapper 100 iyo Topcon GRS-1.
Maxaa ka jira marka la barbardhigo gps waa qiimaha. Sidaas ayaanu u isticmaali doonaa Dukaanka Google ujeedooyinkan:
MobileMapper 100 3.295,00 US $, oo ay ku jirto software-ka-shaqeynta ka dib
Trimble Juno T41 1.218 US $ oo leh Windows iyo 1.605 US $ la Android
Leica Zeno 5 ... wax qiimo ah ma lahan Gaadiidka Google laakiin waa ku socdaa hareeraha US $ 4.200
Ugu dambeyntii, waxaan u maleyneynaa inay tahay adeeg xiiso leh Geo, taas oo loogu talagalay in lagu doorto ikhtiyaarka ugu fiican ee khayraadka loo baahan yahay ee ku yaal baaxadda dhulka.
Xitaa waa waxbarasho sababtoo ah marka la barbardhigo GPS waa inaad aragto tusaale ahaan, saldhigyada guud, qalabyada isdabajoogga, isbarbardhigga udhaxeeya sawirada dayax gacmeedyada kala duwan, farqiga u dhaxeeya ArcPad ee iPad, Windows iyo qaabka cusub ee Android.
Waqtiga, cod bixinta dadka isticmaala, ra'yiga iyo isdhexgalka alaab-qeybiyeyaasha kale waxay ka dhigi karaan Geo-ku habboon fikrado xiiso leh.
Post Previous«Previous Joornaalada jimicsiga - Diiwaanka 40s ee muhiimka ah
Post Next koorsooyinka Free 3D AutoCAD - Revit - Microstation V8i 3DNext »
2 Jawaab ah "Isbarbardhiga GPS - Leica, Magellan, Trimble iyo Topcon"
Qaybtayda, ku ammaan sida qorshaha ah in la isbarbardhigo nidaamyada GPS-ga iyo qalabka kala duwan, iyo sidoo kale saldhigyada guud.
Waxay noqon kartaa qaab wanaagsan oo tixraac ah dadka doonaya in ay soo iibsadaan koox iyo in ay qabtaan shaqooyinkii hore ee la sameeyay, laga bilaabo daraasaadka xogta wax lagu qoro ee ganacsiga.
Nasiib daro waa, nasiib darro, qalab joojinteedi waa mid faahfaahsan oo kuwa cusub ee suuqa aan lagu darin.
Sida maqaalka, laga yaabee in 2013 sanadka, weli ma ay si ballaaran la faafiyay, laakiin ha qalabka Trimble ugu la mid ah kuwa ka mid ah noocyada kale ee barbardhigay waa Geoexplorer Trimble ku GEO5.
Trimble t41, waxaa sidoo kale loo yaqaan in kooxihii kale geoposcionamiento sida JUNO5, waxaa jira dhowr qaabka, dekedda 3G ama ma, Android ama Windows Mobile. Sannadka 2014 ayaa balaariyay xadka ayadoo la hagaajinayo SBAS ilaa mitirka 1.
Gerardo Salinas isagu wuxuu leeyahay:
Maqaalkani waa mid aad u xiiso badan